Weerar ka dhacay dalka Afghanistan oo ay ciidamo ku dhinteen | Star FM
Home Caalamka Weerar ka dhacay dalka Afghanistan oo ay ciidamo ku dhinteen
Weerar ka dhacay dalka Afghanistan oo ay ciidamo ku dhinteen
Qof isa soo miidaamiyay ayaa baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku galay saldhig ay leeyihiin ciidamada difaaca ee dalka Afghanistan, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan sideed ka tirsan ciidamada amaanka ee dalkaasi.
Waxaa mas’uliyadda weerarkan sheegtay kooxda Taliban.
Weerarka ayaa ka dhacay gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan.
Afhayeenka Taalibaan Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in kooxdooda ay weerarka soo qaadeen.
Guddoomiye Kuxigeenka gobolka Nangarhar Ajmal Omar, ayaa xaqiijiyay weerarka.
Waxaa uu sheegay in 15 askari ee qaraxa ku dhinteen halka 5 kale uu dhaawac soo gaaray.
Next articleMadaxtooyada Soomaaliya oo war ka soo saartay kulankii MD Farmaajo Iyo beesha caalamka